भोर्लेबासीका लागि बरदान भूपू लाहुरे गाउँलेले पाए ३० वर्षपछि सुद्ध खानेपानी – Muluki Khabar
चिलाउने, असोज २४
नगरपालिका र सुगम क्षेत्र भनेर मात्र के गर्नु, ठाउँ बिकट खानेपानी र अन्य सेवा सविधाका लागि दुर्गम उदयपुरको जाल्पा चिलाउनेमा वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या समाधान भएको छ । यस्तै सदरमुकामकै त्रियुगा नगरपालिका भएर पनि बिकट ठाउँ वडा नं. १६ को भोर्लेमा पूर्व लाहुरेहरुको संस्था ‘गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट’ धरानको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको हो ।
वर्र्षौंदेखि खानेपानीबाट वञ्चित रहँदै आएका गाउँलेलाई भर्खरै सम्पन्न खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएपछि शनिबारदेखि स्थानीयले सुद्ध खानेपानीको सुविधा पाएका हुन् । ३० वर्षअघि कुलो खनेर गाउँमा ल्याएको खानेपानी ०४५ सालको भूकम्पले भत्काएपछि गाउँले पानीविहीन बन्न पुगेका थिए । कुलो भत्केर पानी आउन छाडेपछि जरुवा र खोलाको धमिलो पानी खान बाध्य स्थानीयलाई वेलफेयरले सुद्ध पानीको व्यवस्था गरेको हो ।
नगरपालिका भए पनि बिकट गाउँ भएकाले पानीको चरम अभाव भोग्दै आएका स्थानीयको समस्या टार्न वडा कार्यालयले वेलफेयरसँग खानेपानी योजना निर्माणका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार ट्रस्टले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेपछि त्यहाँ सुरु भएको ‘भोर्ले खानेपानी योजना’ निर्माण सम्पन्न भएर पानी उपभोग गर्न सुरु भएको वडाध्यक्ष मानबहादुर राईले बताए । ०७६ चैत १५ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको योजना सम्पन्न भएपछि शनिबार एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्दै समुदायलाई हस्तान्तरणसमेत गरिएको राईले बताए ।
योजनाका लागि ३९ लाख ६ हजार १ सय २४ रुपैंयाको लागत इस्टीमेट बनेकोमा ३५ लाख २६ हजार १ सय १८ बाटै सम्पन्न भएको उनले बताए । योजनामा वेलफेयरबाट २० लाख ८५ हजार ४ सय ४३ रुपैंया र उपभोक्ताबाट १४ लाख ४० हजार ६ सय ७५ रुपैंया लगानी भएको वडाध्यक्ष राईले बताएका छन् । नवनिर्मित योजनाबाट ३९ वटा धारा जडान गरी त्यसमार्फत स्थानीय समुदाय र भोर्ले माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थीलाई सुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । राईका अनुसार वर्षौंदेखि काकाकुल रहेका भोर्लेबासी जनताले सुद्ध खानेपानी पाएपछि हर्षविभोर भएर पूर्व लाहुरेहरुलाई धन्यबाद दिएका छन् । वडाध्यक्ष राईले गाउँलेको तर्फबाट उनीहरुको संस्था गोर्खा वेलफेयरलाई मुरी मुरी धन्वबाद दिएका छन् ।
वेलफेयरका परियोजना प्रबन्धक कृष्णबहादुर सुब्बाका अनुसार भोर्लेका १ सय ३ महिला र १ सय २१ पुरुष समुदायतर्फ तथा भोर्ले माविका ३ सय ३६ विद्यार्थी र शिक्षक खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । योजना ‘मल्टीआर्टी सिस्टम प्रबिधि’मा निर्माण भएको भन्दै उनले मुहानबाट आएको पानी जम्मा गर्ने, फिल्टर गर्ने र पानी निकास दिने गरी ६ वटा छुट्टाछुट्टै टयाङ्की बनाइएका छन् भने एउटा पक्की ड्याम बनाइएको छ । ती छुट्टाछुट्टै ट्याङ्कीमार्फत फोहोर पानी नै मुहानबाट आए पनि सुद्धिकरण भएर उपभोक्ताको धारामा पुग्ने गरेको सुब्बाले बताए ।
शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले खानेपानीको उद्घाटन गरिने । साथै वडाध्यक्ष राई र वेलफेयरका प्रबन्धक सुब्बाले संयुक्त रुपमा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा सांसद थापाले सुद्ध खानेपानी पाएकोमा उपभोक्तालाई बधाई दिदै सफा पानी पिएर स्वस्थ्य रहन, घर वरिपरि सफा राख्न र योजनालाई दीगो र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरिन् । उनले योजनाको दीगोपन, सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसभाबाट प्राप्त हुने आप्mनो निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको रकम चालु बजेटबाट २ लाख ५० हजार सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेकी छिन् ।
गाउँमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएपछि १६ नं. वडा पनि अव विकट नरहेको स्थानीय भुवन दाहालले बताए । उनले विद्युत, टेलिफोन टावर, सडकजस्ता पूर्वाधार वडाका बस्तीबस्तीसम्म यसअघि नै निर्माण भइसकेको भन्दै बाँकी रहेको खानेपानीको समस्या पनि टरेपछि अव भने १६ नं.वडा पनि नगरपालिकाकै अंग साविबत भएको बताए । अहिलेसम्म विकट वडा अव सुगम र विकसित वडामा दरिन पुगेको दाहालले बताए । ‘सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो ठाउँमा खानेपानी नै हो’ दाहालले भने ‘ट्रस्टको यो सहयोगले जनतालाई ठूलो बरदान भयो ।’
क्याप्सनः खानेपानी उद्घाटन गर्दै सांसद थापा, वडाध्यक्ष राई र सुब्बा । तस्विरः महेश्वर